व्रतबाटै हुन्छ शरीरलाई फाइदा, हेर्नुस् यस्ता छन् फाइदाहरु
हाम्रो समाजमा धेरैजसो व्रत धार्मिक रूपमा बस्ने गरेको पाइन्छ। तर व्रत धार्मिक हिसाबले मात्र होइन, खाना र पानीको तरिका पु¥याएर बसेमा स्वास्थ्यका हिसाबले पनि निकै फलदायी हुन्छ। दिनभर केही नखाई बस्नुलाई मात्र व्रत अर्थात् उपवास भनेर बुझिन्छ। खासमा शारीरिक क्रियाकलाप र मनको शुद्धीकरण गर्नु पनि व्रत हो।
साउनको सुरुवातसँगै हरेक सोमबार हिन्दूधर्मावलम्बी महिला हातमा हरिया चुरा, मेहन्दी अनि हरिया, राता र पहेँला लुगामा सजिएर शिवको व्रत बस्छन्। यसपालि पनि धेरै महिला व्रत बसे। अहिले तीजको माहौल छ। धार्मिक हिसाबले तीजको महत्व धेरै छ। पार्वतीले भगवान शिवका लागि निराहार व्रत बसेको भनाइ छ। त्यसैले महिलाहरू तीजमा आफ्नो परिवार, बालबालिका र श्रीमान्को सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्छन्। व्रत जुनसुकै उद्देश्यले बसे पनि त्यसले स्वास्थ्यलाई निकै लाभ गर्छ।
महिलाले मात्र होइन, के महिला के पुरुष हरेक व्यक्तिले हप्तामा एक दिन व्रत बसेमा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ। यसले हप्ता दिनसम्म पाचन मार्गमा जमेका विकार सफा गरी शरीर स्वस्थ पार्छ। शरीरको शुद्धीकरण गराउँछ।
तीजको व्रत होस् वा अन्य व्रत, व्रत बस्दा दिनभर केही नखाने र बेलुकीपख एकैचोटि चिल्लो मिठाई, सेलरोटी, हलुवा, दूधदही जस्ता खानेकुरा खाने गरेको पाइन्छ। व्रत बसेको साँझ वा अन्य बेला यसरी खाँदा शरीरलाई हानि हुन्छ। कतिले त दिनभर पानी समेत नखाई बस्छन्। व्रत बस्दा पनि शरीरलाई पानी चाहिन्छ। पानी नखाँदा शरीर सुक्खा भई पानीको मात्रा कम हुन्छ र समस्या आउँछ। त्यसैगरी खाली पेटमा चिल्लो परिकार, दूध, दही र मिठाई खाँदा ग्यास बढ्छ, वाकवाकी लाग्ने, रिंगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने र बेहोस हुनेसम्म हुन्छ र दीर्घ रोग ग्यास्ट्राइटिस लगायत अरु जीर्ण रोग लाग्छ। त्यसैले जथाभावी खाएर व्रत बस्नुभन्दा खाना र पानीको नियम पु¥याएर व्रत बसेमा धार्मिक हिसाबले मात्र होइन, स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ।
सामान्यतः व्रत एक दिन नै बसेको पाइन्छ, त्यसमाथि एक छाक खाएर। एक दिन, तीन दिन, १५ दिन र महिना दिनसम्म पनि बस्न सकिन्छ व्रत। तर, शरीरको अवस्था हेरेर अनि विज्ञसँग सल्लाह गरेर बस्नुपर्छ। अहिले प्रचलित एकदिने व्रतलाई चार प्रकारले लिन सकिन्छ।
निराहार :- केही आहार नखाई एक–एक घन्टामा एक गिलास पानी मात्र पिएर दिनभर बस्नुलाई निराहार व्रत भनिन्छ। यो व्रतले शरीरलाई पूर्ण रूपमा सफा गर्छ।
रसाहार :- कुनै फलको रस मात्र पिएर बस्ने व्रतलाई रसाहार भनिन्छ। फलफूलको एक गिलास जुस दुई या तीन घन्टाको बीचमा पिउने, बीचबीचमा एक घन्टाको फरकमा एक गिलास पानी पनि पिउने। यो शरीर सफाइको प्रभावकारी विधि हो।
फलाहार :- फल मात्र खाएर बस्नुलाई फलाहार भनिन्छ। फल दिनको तीन–चारपटक खाने र बीचमा एक–एक घन्टाको फरकमा एक–एक गिलास पानी पिउने, यसो गर्दा पनि शरीरलाई निकै लाभ हुन्छ।
एकछाके :- दिनमा एक छाक मात्र खाने र अरू बेला घन्टैपिच्छे पानी पिउने एकछाके व्रत हो। अचेल चलिआएको व्रत एकछाके हो।
प्राचीनकालदेखि नै स्वास्थ्यमा केही समस्या भएमा उपवास बस्ने चलन थियो। जीवजन्तुले पनि समस्या हुँदा केही नखाई आराम गरेको पाइन्छ। त्यसैले धार्मिक हिसाबले मात्र होइन, स्वास्थ्यका हिसाबले पनि वर्षैभरि हप्तामा एक दिन निराहार, रसाहार, फलाहार या एकछाके व्रत बस्दा स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। एक दिन नखाई बस्दा शरीरलाई आराम मिल्छ। शरीरमा जमेको फोहर निष्काशन हुन्छ र शरीर सफा हुन्छ।
तर, साताको एक दिन व्रत बसेर शरीर शुद्धीकरण भइहाल्छ भनेर बाँकी ६ दिन जथाभावी खानु गलत हो। जहिले पनि समय मिलाएर उचित आहार खानुपर्छ। तर उचित आहार कसरी खाने, कति खाने र के के खाने भन्नेमा अलमल भएको पाइन्छ। प्रकृतिप्रेमी समूह, निरोगधामका संस्थापक डा. उमेश श्रेष्ठले उचित आहारलाई तीन बराबर आहारका रूपमा शुत्रबद्ध गर्नु भएको छ। हाम्रो शरीरलाई रेसा, छोक्राबोक्रा भएका अन्न, हरियो सागसब्जी र फलफूल चाहिन्छ। प्रकृतिकै काखमा पाकेका अप्रशोधित चामल, गहुँ, मकै, फापर, कोदोजस्ता अन्नको एक भाग, हरिया सागसब्जी एक भाग र काँचो सलाद÷फलफूल एक भागको मिश्रण नै तीन बराबर उचित आहार हो। यसरी खाँदा शरीरलाई चाहिने छोक्राबोक्रा प्रशस्त मात्रामा पुग्छ र कब्जियत हुँदैन। कब्जियत नभएपछि स्वस्थ रहन सकिन्छ।
व्रत बस्दा पनि साँझमा तीन बराबर आहार खानुपर्छ। यसको धेरै परिकार बनाउन सकिन्छ। जस्तै, रोटीसँग उसिनेर हरियो तरकारी र फलफूल खान सकिन्छ। त्यसैगरी घरमै चिल्लोरहित सुजीको हलुवा, गाजरको हलुवा, मकै, गहुँको ढिँडोसँगै हरियो तरकारी र सलाद पनि खान सकिन्छ। व्रत बसेको दिनमा नुन नखानु उपयुक्त हुन्छ तर नुन खानैपरे आफ्नो इच्छाअनुसार राख्न सकिन्छ। यसरी खाँदा पेट सफा हुन्छ र व्रत बस्नुको पूर्ण लाभ मिल्छ।
एकदिने उपवासका लाभ
तौल घटाउँछ :- व्रत बस्दा शरीरमा बढी जमेको बोसोबाट शरीरलाई आवश्यक क्यालोरी कटौती हुन्छ। कब्जियत खुल्छ र तौल घट्छ। तर व्रतबाहेक अरुबेला जथाभावी खाँदा तौल घट्दैन। एकैचोटि धेरै खानु हुँदैन, ठिक्क मात्रा मिलाएर खानुपर्छ।
रक्तचाप घटाउँछ :- उपवासबाट उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल पनि घट्छ। जमेका बोसोलाई गलाएर त्यहीँबाट शरीरलाई चाहिने खाना प्रयोग हुने भएकाले बोसो कम हुन्छ। रगत सफा हुन्छ। पाचनक्रिया ढिला हुनेले पनि हप्ताको एकचोटि व्रत बस्दा लाभ हुन्छ। पाचन प्रणालीलाई पनि आराम मिल्छ।
खानामा रुचि :- खानामा अरुचि भएकाले साताको एक दिन व्रत बस्दा खानामा रुचि बढ्छ। व्रत बस्दा भोक के हो भन्ने अनुभव हुन्छ। बीचमा कुचुकुचु खाँदा भोक नलाग्ने हुन्छ। त्यसैले हरेक खाना खाने समय अन्तर चार–पाँच घन्टा हुनुपर्छ। बीचमा हरेक घन्टामा पानी पिउनुपर्छ।
सिर्जनशील बनाउँछ :- हाम्रो शरीरमा पाचनक्रियामा धेरै शक्ति खर्च हुन्छ। व्रत बस्दा पाचनक्रिया नहुने हुँदा शक्ति बढ्छ, शरीर हलुका हुन्छ। सफा शरीर र स्वच्छ मनले नयाँ सिर्जना गर्न सकिन्छ।
छालामा चमक आउँछ :- एक दिन खाना नखाँदा शरीरले जमेका टक्सिन सफा गर्छ। त्यसैगरी अरु अंग फोक्सो, मिर्गौला, मुटुलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। रगत सफा हुन्छ। छालामा चमक आउँछ।
स्वस्थ्य भइन्छ :- अंग्रेजीमा एउटा उखान छ– द लेस यु इट द लंगर यु विल लिभ अर्थात् धेरै खाए मल, थोरै खाए बल। ठिक्क खाँदा प्राकृतिक नियमअनुसार हर्मोनलाई अधिनमा राखेर काम गर्न सजिलो हुन्छ, हर्मोनले ठीक काम गर्छ र स्वस्थ भइन्छ।
हामीले खाने आहार गलत भएर नै शरीरमा कब्जियत र कब्जियतपछि मोटोपन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम, बाथ आदि समस्या देखा पर्छन्। आहारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पेटसँग भएकाले पेटबाटै समस्या आउँछ। शरीरमा समस्या आएपछि नखाई बस्नु रोगबाट मुक्त हुने विधि हो। रोगबाट मुक्त हुन र शरीर शुद्धीकरण गर्न प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको प्राकृतिक विधि हो, उपवास।
तीजमा महिला पानीसम्म नपिई निराहार व्रत बस्छन्। आफ्नो र परिवारको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुका लागि व्रत बसेको दिन वा अरुबेला अप्राकृतिक खाद्यवस्तु खाएर शरीरमा दीर्घकालीन समस्या निम्ताउने कि प्राकृतिक स्वास्थ्यवद्र्धक खाना खाएर स्वस्थ हुने ? तपाईंको हातमा छ।
गर्भवती महिलाले पूर्ण उपवास (निराहार) बस्नु हुँदैन।
दैनिक औषधि खाएकाले र रोग लागेकाहरुले व्रत बस्नुअघि विज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ।
व्रत बसेको साँझ एकैचोटि धेरै नखाने। चिल्लो, पिरो, अमिलो, तारे भुटेका र जंक फुड नखाने।
प्रतिघन्टा वा दुई घन्टामा अनिवार्य पानी पिउने। एकपटकमा एक गिलास पिउने।
व्रत बस्दा आरामको जरुरी पर्छ, त्यसैले धपेडी हुने भारी काम नगर्ने।